जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन – Sandesh Press
November 22, 2020 316
पाकिजा’ फिल्ममा अभिनय गरेकी गीता कपूर ।
पाकिजा’ जस्तो फिल्ममा अभिनय गरेकी गीता कपूरको निधन सन् २०१८ मे २६ मा भएको थियो । गीताको अन्तिम समय निकै कष्टकर बितेको थियो । उनका सन्तानले पनि उनको हेरचाह गरेका थिएनन । गीताको कोरियोग्राफर छोरा उनलाई अस्पतालमा छोडेर भागेका थिए । अशोक पण्डित र अन्य बलिउड अभिनेताहरुले गीताको उपचार खर्च उठाइरहेका थिए ।
Prevआमाको मिर्गौला फे’रिएकी अभिनेत्री आचार्यको मृ’त्यु, के मृ’त्यु बारे पहिले थाहा थियो ?
Nextपिसाब रोकिएकी नानीलाई कसैले भर्ना नलिएपछि अस्पताल चाहार्दा-चाहार्दै मृत्यु
बैबाहिक जीवनमा बाधिएकी गायिका नेहा कक्कड आमा बन्दै